Breaking – कोरोना क’हरको बेला नेपालमा देखा पर्यो फेरि अर्को म’हामारी ! – Life Nepali
Breaking – कोरोना क’हरको बेला नेपालमा देखा पर्यो फेरि अर्को म’हामारी !
कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको बाँकेको नरैनापुरमा औलो संक्रमण फैलिएको छ। नरैनापुरमा मात्रै ४२ जनामा औलो रो’गको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। औ’लो रो’ग लामखुट्टेको टो|काइबाट सर्छ। समयमै उपचार हुन नसके संक्रमितको ज्या’न नै जान सक्छ। लामखुट्टेको प्र’कोप धेरै हुने भएकाले बाँकेको नरैनापुर औ’लो रो’गको उच्च जो’खिममा छ। हरेक वर्ष चैतदेखि असारसम्म नरैनापुरमा औ’लो रो’गको प्र’कोप देखिँदै आएको छ। **** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नरैनापुरमा १५ जनामा औ’लो सं’क्रमण देखिएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा नरैनापुरका ४२ जनामा औलोको संक्रमण देखिएको हो। साउन १ गतेदेखि हालसम्म नरैनापुरका थप ४ जनामा औलोको संक्रमण देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको जो’खिमका कारण यो वर्ष औलो रो’गको परीक्षण एक तिहाई मात्रै भएपनि संक्रमितहरुको संख्या भने तीन गुणा देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेकी औ’लो फोकल पर्सन दुर्गा गौतमले बताइन। कोरोनाको जोखिम बढेपछि चैतदेखि असारसम्म नरैनापुरमा मात्रै भारतबाट एक हजार ३१३ युवा फर्किएका थिए।
ठुलो संख्यामा भारतबाट घर फर्किएका युवाहरुले औलोको संक्रमण पनि सँगै ल्याएको अनुमान स्वास्थ्यकर्मीहरुको छ। बाँके नरैनापुरको क्वारेन्टाइनमा बसेका एक जनामा औलोको संक्रमण देखिएको थियो। विदेशबाट नेपालमा भित्रने औलो संक्रमितमध्ये ९८ प्रतिशत भारतबाट आउने गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ। कोरोना संक्रमणको जो’खिम बढ्दै गएका कारण यो वर्ष चैतदेखि हालसम्म लाखौंको संख्यामा युवाहरु भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्किएका थिए। औलोको संक्रमण पनि म’हामारीको रुपमा फै’लनसक्ने जोखिम रहेको सेभ द चिल्ड्रेनका औलो निगरानी, संयोजक डा. मदन कोइरालाले बताए। बाँकेको नरैनापुरमा गरीब तथा विपन्न समुदायको बसोबास छ। ३१ प्रतिशत मात्रै साक्षरता भएको नरैनापुरमा स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतनाको अवस्था निकै नाजुक छ। लामखुट्टेको प्र’कोप धेरै हुने क्षेत्रका मानिसहरुलाई औलो रो’गको जो’खिमबाट जोगाउनका लागि लामुखुट्टेको टो’काइबाट बचाउनुपर्छ। *** पूरा भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
Previous रुसले भन्यो – हामिले बनाएको कोरोना भ्याक्सिन छिट्टै नेपाललाइ प्रदान गर्नेछौं !
Next एकाबिहान सम्पूर्ण देशबासीहरुका लागि आयो महत्वपूर्ण सुचना ! ( सबैले पढ्नै पर्ने )